यसकारण बिरामीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो, कर्मचारीदेखि एजेन्सी सबैलाई हारगुहार गर्दा पनि टिकट पाईएन – Sandesh Press
October 27, 2021 137
यहाँस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले रेफर गरेको कागज देखाउँदै गुठीचौर गाउँपालिकाका रिमाल पाण्डे विमानस्थल पुग्नुभयो । उहाँको तीन महिनाको छोरा रिवानलाई एक्कासि श्वासप्रश्वासको समस्या भएपछि अस्पतालमा उपचारत थिए । अस्पतालले नर्मल श्वासप्रश्वासको दर ५० देखि ६० हुनुपर्ने भए पनि घटेर ३६ मा पुगेपछि थप उपचारका लागि शनिबार नै रेफर गरेको थियो । निकै गम्भीर प्रकृतिको बिरामी छोरा लिएर उहाँ विमानस्थल पुग्नुभएको थियो । हवाई टिकटका लागि एयरलाइन्सका कर्मचारीदेखि एजेन्सी सबैलाई हारगुहार गर्नुभयो तर उहाँले टिकट पाउनुभएन ।
विमानस्थल जानुअघि उहाँले पटकपटक फोन गर्नुभएको थियो । उहाँले देखाएको रेफर कागजको विमानस्थलले सुनुवाइ गरेन । उहाँ छोरा लिएर घर फर्किनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “समयमै रेफर गरिएको अस्पतालमा लिएको भए छोरा निको हुने आश गरेको थिए । विमानस्थलमा देखिएको मनपरीले बिरामी छोरो बोकेर घर फर्किन बाध्य भए । दुई दिनअघिदेखि टिकटका लागि पहल थालेको थिएँ । एयरलाइन्स र एजेन्सीका मान्छेलाई फोन गरेको थिएँ । छोराको अवस्था जटिल हुँदै टिकटका लागि पहल गरेको थिएँ तर टिकट पाउन सकिनँ । अन्ततः बिरामी छोरो बोकेर घर फर्किंए ।”
एयरलाइन्सका कर्मचारी र एजेन्सीका मान्छेले तीन दिनअघि देखि सिट प्याक भइसकेको जनाउँदै उहाँलाई फर्काइदिएका थिए । बिरामीले जहाजमा उड्न नपाउनु विडम्बना हो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अफ्ठयारो गाह्रो पर्दा हारगुहार माग्छौँ । टिकट पाउँदैनौँ । हवाई सेवा पहुँचवालाको मात्र होइन ।”
दुई दिनअघि जुम्ला विमानस्थलमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर टिकट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । कुनै पनि बिरामी जहाजमा जान पाउनुपर्ने जनाउँदै बिरामीको विकल्प अरू हुन नसक्ने बैठकको निष्कर्ष थियो ।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बिरामीले टिकट नपाउनु सुखद पक्ष नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै एयर कम्पनीले बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनि मात्र जहाज कम्पनीले सेवा दिएको अनुभूति हुनेछ ।” उहाँले दुःखी बिरामीका लागि कर्णालीको हवाई सेवा आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको बताउनुभयो ।
विमानस्थलमा भएको भद्रगोलको बारेमा जति निर्णय र छलफल भए पनि इटिकटको व्यवस्था नभएसम्म नरोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले हवाई सेवामा रेफर भएका बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै दिनदेखि बिरामी होल्डमा थिए । अक्सिजन सिलिन्डर अभावले रोकिएका पातारासीका एक बिरामीलाई सोमबार पठाइएको थियो । अन्य बिरामीलाई जटिलता हेरेर प्राथमिकता दिइन्छ । सबैले समान रुपमा हवाई सेवा पाउनुपर्छ ।” बिरामीलाई टिकट मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । यहाँ तारा, सीता र समिट एयरका जहाज चल्ने गरेका छन् ।
Prevसमिक्षाले मुख खोलेपछि पललाई पनि मुख खोल्न कर लाग्यो, खुलाए नालीबेली !
Nextपुरुषको कानैबाट थाहा पाउनुहोस् कस्ता व्यक्ति धनि र कस्ता कंगाल, तपाईको कस्तो ?
स्वदेशमै रिक्सा चलाएर अपांग श्रीमान र छोरी पाल्दै यी महान चेली’ यिनलाई सम्मान स्वरुप के भन्नुहुन्छ हजुर ?
यिनै हुन् आज भएको दुर्घटनामा अकालमै ज्या’न गुमाएका बाबु छोरा